Bichar Khabar » सिटिईभिटीकाे परिचय बदल्नेगरी काम गर्न सहसचिवहरुलाई मन्त्रीकाे निर्देशन
सिटिईभिटीकाे परिचय बदल्नेगरी काम गर्न सहसचिवहरुलाई मन्त्रीकाे निर्देशन
5 Sep 2018 10:09:48 AM | No Comments
बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटी) को परिचय बदल्नेगरी काम गर्न सिटिईभिटीका सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सिटिईभिटी प्रतिको आमजनताको धारणा बदल्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउदैं पोखरेलले सिटिईभिटीको बिग्रेको छविलाई सुधार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले सिटिईभिटीका कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा आफ्ना वा आफन्तका नाममा सिटिईभिटी अन्तर्गतका प्राईभेट संस्थाहरुको मालिक बन्ने आम जनताको आरोप छ । तपाईहरु सार्वजानिक ठाँउमा सिटिईभिटीको कर्मचारी हुँ भनेर परिचय दिदा ह्रदयदेखि नैं गर्व हुने वातावरण छ त ? मन्त्री पोखरेलकाे प्रश्न थियाे । यो ६ महिनाको बिचमा सिटिईभिटीले गरेका कामको नतिजा र प्रगतिकाे मन्त्री पाेखरेलले माग गरेका छन् ।उनले सिटिइभिटीले गरिरहेको कामको गति बढाउन र नतिजा आउनेगरी काम गर्न मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका हुन् ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि शिक्षामा नीजिकरण प्रवेश गरेको बताउँदैं उनले यस्को प्रभाव सिटिईभिटीमा पनि परेको बताए । लामो समयदेखि सयौं फाईलहरु हुँदा हुँदैं पनि हामीले ९५ वटा सामुदायिक विद्यालयलमा प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका छौं, मेरो यो निर्णयको स्पिड र मर्म बुझ्न अनुरोध गर्छु । मन्त्री पोखरेलले भने मन्त्रीको भुमिकाबाट बाहिरिदैं गर्दा मेरा नाममा कुनैं नीजि कलेजको सेयर हुनेछैंन । संस्थागत पारदर्शि ढंगबाट सम्पुर्ण कामहरु सम्पादन गर्नुहोस ।
सिटिईभिटीमा ९ सय ३२ जना कर्मचारीहरु छन् । त्यसमध्ये सय भन्दा धेरैं उपसचिव र २० भन्दा बढी सहसचिव स्तरका जनशक्ति छन् । ति जनशक्ति कसरी सदुपयोग गरिएको छ ? मन्त्री पोखरेलले प्रश्न गरे ।